စိန်ထွန်း. ဒေါက်တာစိန်ထွန်း သည် နိုင်ငံတကာ အနုမြူစွမ်းအင် အေ
ⓘ စိန်ထွန်း. ဒေါက်တာစိန်ထွန်း သည် နိုင်ငံတကာ အနုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ အသိအမှတ်ပြု ပညာရှင်၊ အက်တမ်နှင့် အနုမြူ ရူပဗေဒနယ်ပယ် သုတေသနပညာရှင်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် သုတေ ..